Haweenay Soomaali ah Oo Ka Tirsan Baarlamaanka Kenya Oo La Jidh Dilay | Gabiley News Online
Bariga Wajir, ayaa maanta weeraray xildhibaan Faaduma Geedi oo iyana laga soo doorto Wajir, kana wada tirsan yihiin baarlamanka Kenya.
Rashiid ayaa la sheegay inuu Faaduma, oo ay ka wada mid yihiin xildhibaanadda deegaanadda soomaalida ugu jira baarlamaanka kenya, uu kaga daba yimid halka baabuurta la dhigto ee dhismaha baarlamanka Kenya, kadibna ay dhex-martay dood kulul ka hor inta aanu u gacan qaadin.
Dooda Xildhibaanadda Rashiid iyo Faadumo waxa sheeda kala socday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya iyo ciidamadda ilaaladda amaanka ee baarlamaanka.
Rashiid ayaa la sheegay inuu Fataumo Geedi oo ka tirsan guddiga miisaaniyadda ee baarlamanka weydiiyey sababta aanay wax lacag ah ugu qoondeyn Bariga Wajir ee isaga laga soo doorto, intii lagu guda jiray booqasho guddiga ay halkaas ku tageen.
“Waxay ahayd qiyaastii 10-kii subaxnimo waxaan la socday xildhibaan Gladys Wanga markii aan is aragnay Rashiid.
Wuxuu I weydiiyey sababta aan wax lacag ah ugu qoondeyn dadka uu matalo. Waxaan ku idhi adigu halkaas ayaad joogtaye, maxaad dadkaaga u soo Abaauli wayday dadkaaga si ay u soo bandhigaan barnaamij koobaya baahidooda” ayay tidhi Faadumo Geedi.
Waxay intaas ku dartay “Wuxuu iigu yeedhay nacas, kadibna wuu I garaacay. Waan naxay, waanan aamini waayey, kadib mar kale ayuu ii gacan qaaday.”
XIldhibaan Wanga oo la socotay Faaduma ayaa sidoo kale xaqiijisay in Rashiid uu garaacay Xildhibaan Faadumo Geedi
Xildhibaan Faaduma ayaa la geeyey Cusbitaalka Karen halkaas oo lagaga daweeeyey dhaawcayo fudud, waxaynay intaasi ka dib kiiskeeda u gudbisay booliska baarlamanka, sida ku cad warqadda lagu xareeyey dacwadda.